Chocolate WASC (Doctored ကိတ်မုန့်) - ကိတ်မုန့်
Chocolate WASC သည် Box Mix အရသာကိုခြစ်ရာကဲ့သို့ပြုလုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်
ချောကလက် ငါတို့လူကြိုက်များ၏ချောကလက်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် WASC စာရွက် အနည်းငယ်ပါဝင်တဲ့အရာတွေအများကြီးနဲ့အတူမင်းရဲ့သေတ္တာကိတ်မုန့်ဟာခြစ်ရာလိုအရသာရှိလိမ့်မယ်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်အလင်းဖြစ်ပြီး fluffy ဖြစ်သော်လည်းကိတ်မုန့်ကိုထွင်းရန်သို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်တစ်ခုအတွက်သိုလှောင်ရန်လုံလောက်သောကြံ့ခိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ သင်တစ် ဦး မုန့်ဖုတ်သို့ကျဆင်းယူရန်အတော်လေးအဆင်သင့်မပါလျှင် Chocolate WASC သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် ချောကလက်ကိတ်မုန့်စာရွက် ခြစ်ရာကနေ။
ဒီကိတ်မုန့်ကိုအရမ်းကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ချဉ်တဲ့မုန့်ပဲ။ ဒါဟာအရသာနှင့်တစ် ဦး အပိုဆောင်းစိုစွတ်သောအဆင့်အထိကောင်းတဲ့ညှိထပ်ပြောသည်။ ချဉ်သောမုန့်သည်ချောကလက်ကိတ်မုန့်များစွာတွင်အသုံးပြုသောလူကြိုက်များသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အား buttermilk သို့မဟုတ် mayonnaise ကိုအသုံးပြုခြင်းမှရရှိနိုင်သောအလားတူအရသာကိုပေးသည်။
ငါကကော်ဖီကိုချောကလက်အရသာထွက်စေသောကြောင့်ရေအစားရေကိုငါ့အရည်အဖြစ်အသုံးပြုလိုသည်။ သင်၏ Battery သည်ကော်ဖီကဲ့သို့အနံ့ပြင်းမည်ဖြစ်သော်လည်းမပူပါနဲ့၊ ကော်ဖီကဲ့သို့အရသာရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ကော်ဖီသောက်စရာမလိုဘူး၊ ရေလိုဒါမှမဟုတ်နို့သောက်ရင်တောင်သောက်နိုင်တယ်။
ချောကလက် WASC လုပ်နည်း
Chocolate WASC ဟာချောကလက်ကောင်းတဲ့ box ရောနှောကနေစတာပါ။ ငါများသောအားဖြင့်သုံးသည် Duncan က Hines ချောကလက် fudge ကိတ်မုန့် ဒါပေမယ့်နတ်ဆိုးများအစားအစာကိတ်မုန့်ကိုလည်းကောင်းကောင်းပြုလိမ့်မည်။ ရောနှောခြင်းပါဝင်သည့်အရာများကိုပန်းကန်ထဲသို့ထည့်ပြီးသင်၏အပိုပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထည့်ပါ။ box ရဲ့နောက်ကျောမှာပါတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလျစ်လျူရှုပြီးအစားအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းသုံးပါ။
သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုပေါင်းစပ်သည်အထိအတူတကွရောထွေးပါ။ ငါ paddle ပူးတွဲပါအတူရပ်တည်ချက်ရောနှောအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်သင်လည်းတစ်ပန်းကန်နှင့်ဇွန်းကိုသုံးနိုင်သည်။
ငါသည်ဤစာရွက်ကိုအရည်ပျော်သောထောပတ်များပါ ၀ င်စေရန်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအခါကိတ်မုန့်သည် ပို၍ နူးညံ့ပြီးကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
ငါဒီမေးခွန်းတွေအများကြီးရ။ အများကြီး။ ငါရပြီ။ သငျသညျ box ကိုရောနှောဤမျှလောက်များစွာသောပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်သွင်း၏ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဒုက္ခဖြတ်သန်းသွားမယ့်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်ခြစ်ရာကနေလုပ်မဟုတ်လော ငါတူစဉ်းစားလေ့ရှိတယ် ဒါပေမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့မုန့်ဖိုတွေကိုသင်ကြားပေးနေတာကလူအတော်များများဟာခြစ်ရာကနေမုန့်ဖုတ်ဖို့အရမ်းကြောက်လန့်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သူတို့မှာဘယ်လိုတိုင်းတာရမယ်ဆိုတာ၊ ဘယ်လိုဘယ်လိုရောနှောပေါင်းစပ်ရမယ်၊ ကောင်းတဲ့ခြစ်ကိတ်မုန့်မျိုးဘယ်လိုအရသာရှိသင့်တယ်ဆိုတာမသိဘူး။
box ကိုရောနှောအကြောင်းကိုအရာကခြစ်ရာကနေကိတ်မုန့်နှင့်အတူတူပဲပါဝင်ပစ္စည်းများမဟုတ်ပါဘူး။ သေတ္တာတစ်လုံးထဲမှာ emulsifiers တွေပါ ၀ င်ပြီးအခြေခံအားဖြင့်ကိတ်မုန့်ကိုသင်ဘာပဲလုပ်လုပ်perfectlyုံမုန့်ဖုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာ? အဲဒီ emulsifiers တွေကကိတ်မုန့်ကိုအရသာနည်းနည်းမြည်းအောင်လုပ်တယ်။ စတော်ဘယ်ရီအနံ့သကြားလုံးစားခြင်းလိုပဲ။ ဒါဟာကောင်းပါတယ်ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်စတော်ဘယ်ရီညာဘက်နဲ့တူအရသာမထားဘူး?
ဒါကြောင့်ဒီအပိုပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက်ထည့်သွင်းသင်နှစ် ဦး စလုံးကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံးကိုပေးသည်။ ကိတ်မုန့်ကိုမုန့်တလုံးကိုဖွင့်ရုံထက်မကပြုလုပ်ပေးသည်။ သို့သော် emulsifiers များသည်ကိတ်မုန့်ကိုအောင်မြင်စွာဖုတ်နိုင်သည်။ ထည့်လိုက်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိတ်မုန့်ကိုအိမ်လုပ်နှင့်တူအောင်မြည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့်စားတော်ဝန်အားအလွန်လိုအပ်သောယုံကြည်မှုနှင့်အိမ်တွင်းကိတ်မုန့်အရသာတစ်စုံတစ်ရာကိုပေးရုံမျှဖြင့်သူတို့ကခြစ်ရာမှနှစ်ခုန်ခုန်လျှင်ခုန်ထွက်လျှင်ရွေးချယ်စရာမှာကြောက်စရာမဟုတ်ပါ။
ကိတ်မုန့်များအတွက် custard အဆာအောင်ဘယ်လို
မယားစကားသည်ချောကလက် WASC ကိတ်မုန့်
ဒီစာရွက်ကိတ်မုန့်တွေအတွက်အရမ်းကောင်းတယ်၊ ပြီးပြည့်စုံတယ်။ ငါသေတ္တာတစ်လုံးထဲကနေအကြောင်း 36 မယားစကားများပါတယ်။
ငါသုံးတာကြိုက်တယ် ချောကလက် buttercream ဒီစာရွက်အဘို့။ အဆိုပါ yummy အရသာကအရမ်းလေးလံသောဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲချောကလက်ကိတ်မုန့်နှင့်အတူperfectlyုံတွဲ။ သငျသညျအခြား yummy ချောကလက်ကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုရှာဖွေနေသည်မှန်လျှင်, ငါ့အစစ်ဆေးပါ ဂင်းနစ်ဘီယာကိတ်မုန့် သော decadent ၏ယုဂျဖြစ်ပါတယ်။
သင်စမ်းချင်သောအခြား doctored box ရောနှောချက်ပြုတ်နည်းများ!
၎င်းသည် WASC စာရွက်၏ချောကလက်ပုံစံဖြစ်သည်။ box ရောနှောခြင်းဖြင့်စတင်ခြင်းနှင့်အချို့သောအပိုပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင်ကိတ်မုန့်ကဲ့သို့ပင်အရသာရှိတဲ့အရသာရှိတဲ့ကိတ်မုန့်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ Shhh ငါမပြောဘူး ဒီစာရွက်ဟာအနံ ၂ ပေရှိတဲ့ပတ်ပတ်လည်ကိတ်မုန့် ၈ လုံးကိုလုပ်တယ်။ ပြင်ဆင်ချိန် -၅ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၃၀ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၃၅ မိနစ် ကယ်လိုရီ390kcal
ချောကလက် WASC စာရွက်
▢၁ သတျတော (၁ သတျတော) Duncan က Hines ချောကလက် Fudge ကိတ်မုန့်
▢၅ oz (၁၄၂ ဆ) ဂျုံမှုန့် ၁ ခွက်
▢နှစ် oz (57 ဆ) ကိုကိုးအမှုန့် 1/2 ခွက်ဖလား
▢၁၂ oz (340 ဆ) ကော်ဖီအေး 1 1/2 ခွက်
▢နှစ် oz (57 ဆ) ဟင်းရွက်ဆီ 1/4 ခွက်ဖလား
▢၄ oz (၁၁၃ ဆ) အရည်ကျိုထောပတ် 1/2 ခွက်ဖလား
▢၆ oz (၁၇၀ ဆ) ဒိန်ချဥ် 3/4 ခွက်ဖလား
▢၇ oz (၁၉၈ ဆ) သကြား ၁ ခွက်
▢၁၆ အောင်စ Semi-Sweet ချောကလက်
▢၁၆ အောင်စ မိုးသည်းထန်စွာကြာပွတ်မုန့်
ချောကလက် WASC ညွှန်ကြားချက်များ
335 to မှမီးဖို Preheat ။ ၈ လက်မကိတ်မုန့်ပြား ၂ လုံးကိုပြင်ပါ။ ငါကိတ်မုန့် goop ကိုပိုနှစ်သက်တယ်။
ခြောက်သွေ့သောအရာများအားလုံးကိုသင်၏ stand mixer ၏ပန်းကန်ထဲသို့လှော်ခတ်ထားသည့်အရာတစ်ခုထဲသို့ထည့်ပါ။ ကျန်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထည့်ပြီး ၁ မိနစ်ခန့်အနိမ့်အမြင့်တွင်ရောစပ်ပါ။
Battery ကိုသင်၏ကိတ်မုန့်ဖုတ်ထဲသို့ထည့်ပြီး ၃၂-၃၅ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပါ။ သွားတိုက်တံမှအလယ်မှထွက်လာသည့်အထိသွားကပ်ကပ်နှင့်ကပ်လျက်အနည်းငယ်မျှသာကျိတ်ပါ။
ပြင်းထန်သောကြာပွတ်မုန့်ကိုအလယ်အလတ်မြင့်အပူရှိန်တွင်အလယ်အလတ်ရှိသောအိုးထဲသို့ထည့်ပါ။ မီးလောင်ရာကိုကာကွယ်ရန်ရံဖန်ရံခါ whisk ။ ဝေးဝေးမသွားပါနဲ့!
ချောကလက်ကိုရေနွေးနဲ့လောင်းပြီး ၅ မိနစ်လောက်ထိုင်ပါ
ဆားထည့်ပြီးချောမွေ့သည်အထိ whisk ။ သင့်တွင်အရည်ပျော်မှုမရှိသောဖုများရှိပါက၎င်းတို့ကိုထုတ်ရန်နှစ်မြှုပ်ခြင်းရောနှောခြင်းကိုသုံးနိုင်သည်။
ချောကလက်ကိုရေတိမ်ပိုင်းပန်းကန်ထဲသို့လောင်းကာမြေပဲထောပတ်ကိုက်ညီသည်အထိအခန်းအပူချိန်တွင်အေးအောင်ထားပါ။ အကယ်၍ ချောကလက်သည်အလွန်ပြင်းထန်ပါက ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်လုပ်နိုင်သည်၊
အလိုရှိသောအဖြစ် Frost ကိတ်မုန့်။
သေတ္တာ၏နောက်ကျောတွင်ပါ ၀ င်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုစိတ်မပူပါနဲ့။ ဤစာရွက်သည် 6'x2 'ကိတ်မုန့် (သို့) ၈'x2' ကိတ်မုန့်သုံးလုံး (ပတ်ပတ်လည်) အတွက်လုံလောက်သော Battery ကိုပြုလုပ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်မင်ကော့ (၄၀) ကိုပြုလုပ်သောကြောင့်မင်ကိတ်မုန့်တစ်ခုလျှင် ၁.၂၅ အောင်စခန့်ရှိသောဘက်ထရီပါရှိသည်။ သင်သည်ကော်ဖီသို့မဟုတ်လွင်ပြင်ရှိသောရေတွင်ဘီယာအမှိုက်များကိုသုံးနိုင်သည်။
နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ခက်ခဲ fondant ဖြစ်ပါတယ်